Home /Blog/Daawo Qarax Xoogan oo Muqdisho ka dhacay Dhinasho 30 qof
Maantey oo Sabti ah saacaddu mArkey ahayd 3:40 daqiiqo xiliga Muqdisho waxaa weerar ismiidaamin ah lala beegsadey Hotel Safaari ee magaalada Muqdisho, Hotelka ayaa ku dhawaa isgoyska Zope. Wadada qaraxu ka dhacay ayaa ahayd midda ugu mashuuqlka iyo saxmadda badan Muqdisho.
Gaari nooca xamuulka ah ayaa laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, waxaana si ba’an loogu raray masaamiirta iyo biraha shubka ee qaraxa kadib finiinka wax ku dila.
Ma jiro tirakoob sax ah, waxaase la aaminsan yahay in dhaawaucu boqolaal dhaafey halka dhimashadu ay kor u dhaafeyso 30 qof. Isbitaalada ayaa sheegay in ay buuxsameen, Wadayaasha gawaarida gargaarka ayaa sheegaya in tanoo kale ay u dhimaneyd tan iyo 2008 oo ay shaqada bilaabeen, gawaarida shibilka ayaana ka qayb-qaadanaya daabulaada dadka waxyeeladu ka soo gaartey. Dadka ku baaba’ay qaraxa ayaa ahaa dad shacab ah, masaakiin dariiqa ku ganacsaneysey iyo dad kale oo badan.
Burbur lixaad leh ayaa gaarey Hotel Safaari waxaana dumey dhismaha oo dhan, sidoo kale waxaa dumey guryaha ka soo horjeeda oo ay ka mid tahay xarunta Bisha Cas, Waxaa dab qabsadey kaalin shidaal oo goobta ku dhawaa kaas oo qiiq iyo uuradiisa laga arkaayo meelo aad u fog. Meyadadka ayaa daadsdan dariiqa oo isu bedeley mid dhiig iyo burbur keliya ah.
Qaraxa kadib waxaa la maqlaayey rasaas cabbaar dhacaysey oo u muuqatey mid la isdhaafsanaayey, taas oo socotey cabbaar.
Lama oga sababta rasmiga ah ee ka danbeysey in Hotel Safaari la beegsado, ilaa hadda ururka al-Shabaab oo la aaminsan yahay in ay ka danbeeyaan weerarkan kama hadlin.
Waa weerarkii ugu cuslaa ee Muqdisho ka dhaca tan iyo isbeddelkii siyaasadeed ee bishii Feberaayo. Raysalwasaaraha Xukuumadda Federaalka ayaa si weyn ugu dooda in xukuumadiisu wax ka qabatey amniga Muqdisho isla markaana ay yaraadeen weeraradii Hoteelada lagu qaadi jirey.